လေနုအေး: ဖောင်ဖျက်သင့် မဖျက်သင့်
Posted by တန်ခူး at 4:58 PM
I do agree with what u said
တန်ခူးရေ.. လက်လှမ်းမှီသလောက် ဝေမျှလိုက်ပါမယ်..ဒီလို information တွေက လိုနေတာ.. ဒီကလူတွေက အဲဒီက အခြေအနေတွေကို သေသေချာချာ မသိကြတဲ့ သူတွေ အများကြီးရယ်။ ကျေးဇူးနော်..
မတန်ခူးရေ.. ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပီး ဗမာတွေအတွက် စိတ်ထိခိုက်လိုက်တာ။ ခက်တာက အထဲမှာကလည်း ဘာမှလုပ်စရာမ၇ှိဘဲ ငုတ်တုတ်ငတ်နေကြတာလေ..။ အဲဒါကြောင့် ဘ၀တွေဖျက်ပီး လာနေကြရတာ..။ တကယ့်ကို ဆုတ်လည်းဆူး စားလည်း ရူးပါပဲ..။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အခုပဲ ငြီးနေတယ်။
သူက siteအတွေ့အကြုံနဲ့ draftingလုပ်သက် ၈နှစ်ရှိတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုလည်း ကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်။ ခက်တာက
စီးပွားကျရင် civilလိုင်းဘက်တွေက အရင်ထိတာ။
အခုတော့ "ဘူ" နေလေရဲ့။
စီးပွားရေးတွေကျ ၊ လူတွေအားလုံးလည်း အသုံးအဖြုန်းတွေ သတိထားကြရင်း အလုပ်ရှာသူတွေလည်း ဒါကို သတိပြုသင့်ကြပါတယ်။ အထဲမှာလည်း ဒုက္ခရောက် ၊ အပြင်မှာလည်း အဆင်မပြေကြတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် မမတန်ခူးရေ။
mama takhuu. thanks you so much.. i also planning to go singapore. now i need to think about this.. i'm working at Malaysia as an accountant. But my salary is little. Coz this work is first for me. so boss not give me any chance.. Whatever, i must try.
မတန်ခူးရေ..ဒီပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ..လာဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေပါနေပြီမို့ ဒီပို့စ်လေးပဲညွှန်းလိုက်တော့မယ်နော်..နို့မို့ဆို တချို့ က မလာစေချင်လို့ထင်နေကြတာ..
ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ဖောင်က ပါလာတော့ တောင်ငူသားလည်း မနေနိုင်တော့ဘူး။း)
အမှန်ပဲ အမရယ်။ သက်ပြင်းမောကြီးသာ ခါခါချနေရတယ်။ နောက်ကနေ လိုက်လာချင်ကြတဲ့
ညီ ညီမတွေကလဲ တပြင်ပြင်။ ဒီကအခြေအနေကိုလည်း ဘာပြောပြော နားမဝင်ကြဘူး။ အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ သေချာပေါက် ချမ်းသာပြီလို့ ထင်နေကြလားမသိပါဘူးဗျာ။
အမရေ.. အခုလိုလေး ပြောပြပေးတာကပဲ ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ ဘယ်သူမှ မပြောပြရင် ဘာမှ မသိနိုင်ဘူးလေ.. အခုလို သိရတော့ လက်လှမ်းမှီရာလေး သတိပေးထားလို့ရတာပေါ့။ ကြုံဖူးတယ် အမရေ.. တချို့လည်း “လာခဲ့ပါ၊ လာခဲ့ပါ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်” ဆိုတာ ပြောတာ၊ တကယ်အလုပ်မရရင် စိတ်ညစ်ရတာကိုယ်ပါပဲ။ နောက်ပြီး တကယ်လည်း ရောက်လာရော “လာခဲ့ပါ”လို့ ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကိုယ်တွေကို လှည့်မကြည့်နိုင်ကြတော့ဘူး.. အဓိကကတော့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ စုံစမ်းပြီး လာကြတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
အမတန်ခူးရေ အဲဒီလိုတွေရှိတာလား။ တကယ်နီးစပ်တဲ့သူ ပြောပြမှ အခြေအနေတွေ သိရတာနော်။ မဟုတ်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိနေမှာ။ ခုလိုလေးတွေရေးတော့ ဖတ်မိ ဆင်ခြင်မိတာပေါ့ အမရယ်။
ဒါတွေ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအချက်ကတော့ တခုတည်းပါ။
ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက် နစ်နာမှုတွေကတော့ ပြောမဆုံးနိုင်အောင်ပါ။
ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ချွန်နေအောင် သွေးထားမှ တန်ကာ ကျမှာပါပဲ။ အခြေအနေက ကိုယ်မဖြစ်ချင်ပေမဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ပြီကိုး။ မတန်ခူးပြောတဲ့ ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ဖို့ဆိုတာ သိပ်လိုအပ်တာပါပဲ။ ကျေးဇူးပါ အမ။
the recession this time will last forafew quarters (years?).. and now semi con companies are starting to layoff...
it wil hit the construction sector big time.... now properties price are coming down..
it will continue to get worse...
မတန်ခူး သတိပေးတာ အရမ်း သင့်တော်ပါတယ်။ အခြေအနေတွေ ကအမျိုးမျိုးဆိုတော့ နိုင်ငံခြားရောက်ရင် ပြီးရော ဆိုပြီး ထွက်မလာသင့်တာ အမှန်ပဲ။
ဆရာမ မမေငြိမ်း ပြောသလိုပါပဲ၊ ဗမာတွေ ဘဝကတော့ တကယ့်ကို ဆုတ်လည်းဆူး စားလည်းရူးပါ၊း(
အမရေ .. ညီမ ပြန်လာပြီး)
တချို့တွေကျ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဖျက်စရာ ဖောင်တောင် မရှိ ၊ ဟိုမှာဆက်နေလည်း ဘာမှထူးမှာ မဟုတ်လို့ သူများဖောင် အငှားစီးပြီး ၊ အရဲစွန့် လာပြီးမှ လုံးဝကို စုံး၂နစ်တော့တာပါပဲ ။
အဲလိုလူတွေကို မြန်မာအချင်းချင်း လိမ်ရက်သူတွေရှိတာကတော့ တကယ့်ကို ရင်နာစရာပဲ ။
သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို အချိန်မီရေးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ များများဖတ်မိအောင် ဝေမျှပေးပါ့မယ် နော်...။
ဟုတ်ပ အမရေ ဒီမှာက စီးပွားရေးကျနေတော့ အလုပ်ခုန်မလို့ဟာ အသာလေးငြိမ်နေရတယ်။
မြန်မာပြည်က လာမဲ့သူတွေကိုလည်း တားထားရတယ်
ကျေးဇူးပါ Anonymous ရေ…
မ ရေ… မျှဝေပေးမယ်ဆိုလို့အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
မ ရေ… အမှန်ပါပဲ… နောက်ဆုံးတော့ ဆူးလဲဆူးစေတော့ ရူးလဲရူးစေတော့… ထမင်းတလုပ်အတွက် ရုန်းကန်ရတာပေ့ါ မ ရယ်….
ညီမရေ… ညီမပြောသလိုဆို ညီမသူငယ်ချင်း ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိပါတယ်…
ပေါက်က စတော့ကစားလို့ လား… ဒီကရှေ့ လျှောက် သတိတော့ထားညီမရေ…
မြတ်နိုးရေ… ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့…
ဟုတ်ပါတယ် လင်းလက်ရေ… တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါ… မတွေ့ တာကြာပြီနော်… မင်္ဂလာဆောင်အတွက် အလုပ်တွေ များနေလား….
ညီမ မရွှေမိရေ… ညီမက မလေးမှာ ဆိုတော့ အဲဒီကနေ လှမ်းကြိုးစားကြည့်ပါလား… အင်တာနက်က လှမ်းလျှောက်ပြီး အင်တာဗျုးရမှ အဲဒီက အလုပ်မထွက်ပဲ အလည်လိုမျိုးလာရင်း ကြိူးစားကြည့်ပေါ့… တရုတ်နှစ်ကူးပြီးတဲ့ အချိန်ဆို အလုပ်ပေါလေ့ရှိတယ်… accountantအလုပ်က ရဖို့ များတတ်ပါတယ်… ညီမမှာ အလုပ်အတွေ့ အကြုံလဲရှိတာပဲ….
အမှန်ပဲ နှင်းရေ… တချို့ ကပြောရုံနဲ့ မယုံကြဘူးနော်…
ကိုဇနိရေ… ဟုတ်ပါတယ်… စဉ်းစားပြင်ဆင်ပြီးမှ လာသင့်ပါတယ်…
ကိုတောင်ငူရေ… ရေကြည်မြက်နုကလဲ ရှာဖို့ ခက်ခက်လာတယ်… အင်း… ကြုံဖူးမှ ယုံတာထက် ကြိူတင်ပြင်ဆင်ထားတာ ပိုကောင်းတာပေ့ါနော်… စွန့် စားမှုအတိုင်းအတာကို သေချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်…
နုရေ… ဟုတ်ပါတယ်… ကိုယ်တိုင်လေ့လာစုံစမ်းတာက အကောင်းဆုံးပါ….
မဇနိရေ… လက်ရှိအခြေအနေပေါ့ညီမရယ်… ပြောနေကြတာတော့ နောက်ထပ် ၁ နှစ်ခွဲ ၂နှစ်လောက် ကြာဦးမယ်တဲ့… ပုံသေတော့ ပြောလို့ မရဘူးပေါ့ညီမရေ…
ချိုသင်းရေ… ဟုတ်ပါတယ်… သူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့ ကိုယ်ကအမြဲတမ်း ဒုတိယ ဦးစားပေးအဆင့်မှာလေ...ချိုသင်းပြောသလို ချွန်နေမှ တော်ရုံကျတယ်….
ဟင်း… မြန်မြန်စီးပွားရေးပြန်တက်ပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပေ့ါ burmesegoldbull ရေ…
ဟုတ်ပါတယ် ပုံရိပ်ရေ… လျှော့တွက်လို့ မရပါဘူး…
ခိုင်ရေ… လက်မှာလဲ သွေးတွေလဲ…စိတ်တွေကလဲ တောင်ရောက်မြောက်ရောက်… စူးလျက်နဲ့ ရူးကြရသူတွေပါ…
ဂျစ်တူးရေ….ဟုတ်တယ်…တချို့ က ဖောင်အငှားစီးလာကြတာ…ရင်လေးစရာပါ… အဆိုးနဲ့ အကောင်း ၂မျိုးလုံးအတွက် ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်…
သက်ဝေရေ… ဝေမျှပေးမယ်ဆိုလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေး ကူညီကြတာပေ့ါနော်…
ကိုတက်တူရေ… မခုန်သေးနဲ့ ဦးနော်… ခဏစောင့်လိုက်ပါဦး…
I do appreciate for your concern. I am also feeling same too.
Let me spread this post to our bro and sis inside MM.
မှတ်သားသွားပါတယ်။ စေတနာရှေ့ဆောင်တဲ့ သတိပေးစကားလေးက တန်ဖိုးရှိတယ်။